Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » IGreat Britain isilungele ukuchuma kwezokuvakasha ngo-2022
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • emihlanganweni • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
Ingabe amakhefu edolobha anganxephezela ukushoda kwabahambi bebhizinisi?
Ukuvulwa kabusha kohambo phakathi kwe-UK, i-Europe kanye ne-US kuzonikeza ithemba lokululama kwezokuvakasha kwangaphakathi - ikakhulukazi njengoba u-2022 uzobona ithuba elihle lomhlaba wonke le-UK.
Izindawo okuyiwa kuzo, abahlinzeki kanye nezindawo ezikhangayo e-UK bahlelelwe ukubona ukululama okuqhubekayo ngo-2022, ngenxa yokulangazelela kwabavakashi basekhaya nabangena eholidini ukuhlola i-British Isles, kuveza ucwaningo olukhishwe namuhla (ngoMsombuluko 1 Novemba) e-WTM London.
Cishe oyedwa kwabayisithupha baseBrithani (16%) bathi bahlela ukubhukha indawo yokuhlala ngo-2022 - naphezu kwesidingo esisabalele samaholide angaphandle njengoba uhambo lwaphesheya kungenzeka lululame ngo-2022 - kuyilapho abathengi bezokuvakasha bamazwe ngamazwe e-WTM London bemagange ukufaka amadili emikhiqizo yase-UK.
Okutholwe, okuvela ku-WTM Industry Report, kuzoba umfutho owamukelekayo kubakhangisi base-UK e-WTM London, abazobe beshisekela ukusizakala ngokuduma kokuvakasha kwasekhaya kanye nesidingo esilindile sezivakashi zaphesheya kwezilwandle ukuthi zibuyele eBrithani.
Lezi zibalo ziphuma okhethweni olubili olwagunyazwa yi-WTM London - abokuqala babuza abathengi abayi-1,000 futhi bathola ukuthi abangu-843 bahlela ukuthatha amaholide ngo-2022. Cishe ingxenye yesithupha (17%) yalaba ithi izothatha indawo yokuhlala.
Inhlolovo yesibili ikhulume nochwepheshe bezohwebo abangama-676 futhi bathola ukuthi abangaphezu kwesigamu (58%) banentshisekelo yokuthola inkontileka yemikhiqizo yase-UK e-WTM London 2021, uma bekhona. Ukuhlukaniswa kwezibalo kubonise ukuthi u-38% 'wayenesithakazelo esikhulu' futhi u-20% 'wayenesithakazelo'.
Lapho ebuzwa ngendawo ethile noma izifunda, iLondon iyona edume kakhulu, kodwa inqwaba yabanye nayo yashiwo ngabaphenduli, okuhlanganisa nezinye izingxenye zase-England (njenge-Devon, Cornwall, Kent and Manchester) kanye ne-Scotland, Ireland ne-Wales.
Izinhlobonhlobo zabakhangisi abanezintshisakalo kanye nemikhiqizo e-UK zizoba se-ExCeL – London ye-WTM London kuleli sonto (ngoMsombuluko 1 - ngoLwesithathu 3 Novemba), okuhlanganisa nenhlangano yezokuvakasha i-European Tour Operators' Association; inkampani yokuqasha umqeqeshi i-Abbey Travel; I-Dover District Council, emele i-White Cliffs Country; Ingcweti yokuvakasha yaseLondon ne-UK Golden Tours; kanye ne-Merlin Attractions, enenqwaba yezindawo e-UK, njenge-Legoland Windsor, i-Alton Towers Resort, i-Warwick Castle, i-Madame Tussauds ne-London Eye.
Ucwaningo uqobo lwe-Merlin Attractions lubonisa ukuthi abathengi e-US nase-UK bakulungele ukubuyela emicimbini yetimu yepaki “ngobuningi babo” ngenxa yento ethi 'JOLA' – Injabulo Yokubheka Phambili.
Ngemuva kweminyaka embalwa enzima, imindeni namaqembu aya ngokuya efuna ukubhuka kusengaphambili ukuze alangazelele ukuvakasha kanye nokuchitha isikhathi ndawonye, ​​ngokusho komdondoshiya wezindawo ezikhangayo.
I-VisitBritain isibikezele ukululama okuhamba kancane okuzayo, okunezizathu eziningi zokubhekana nazo ngemva kweminyaka emibili yokuhamba okunemingcele kakhulu.
Ilinganisela ukuthi ukusetshenziswa kwezivakashi zaphesheya kwezilwandle e-UK ngo-2021 bekungama- $ 5.3 wezigidigidi, uma kuqhathaniswa no-£28.4 billion ngo-2019.
Inhlangano yezohwebo e-Inbound UKinbound inxuse ongqongqoshe kulo lonke lolu bhubhane ukuthi bagqamise usizi lwamalungu ayo, iningi lawo elibone imali yehla ngo-90% noma ngaphezulu.
Kodwa-ke, ukuvulwa kabusha kohambo phakathi kwe-UK, i-Europe kanye ne-US kuzonikeza ithemba lokululama kwezokuvakasha kwangaphakathi - ikakhulukazi njengoba u-2022 uzobona ithuba elihle lomhlaba wonke le-UK. Izosingatha futhi igubhe Imidlalo yeCommonwealth eBirmingham, uMkhosi wase-UK 2022 kanye neJubilee ye-Queen's Platinum.
USimon Press, uMqondisi Wemibukiso we-WTM London, uthe: “Okutholakele kusikisela ukuthi kuzoba nokuhwebelana okusheshayo kwababukisi base-UK e-WTM kulo nyaka - bazobe bezimisele ukusizakala ngentshisekelo evuselelwe yekhefu phakathi kwemakethe yaseBrithani kanye nokwenza. iningi lezivumelwano ezizotholwa nabathengi bamazwe ngamazwe, abamagange ukuphinde baxhumane nabahlinzeki bempahla ngemva kokuma kwamaholidi e-UK.”